ပရဆေးသုတေသနဌာနသည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှ အစွမ်းထက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကို ထုတ်ယူခြင်း၊ ဆေးပင်များပေါင်းစပ်၍ အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း၊ နည်းစဉ်သစ်များဖြင့် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်သည့် သုတေသနများဆောင်ရွက်၍ နည်းပညာလိုအပ်သော ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်သို့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နည်းပညာလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် နည်းပညာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတော်အတွက်အရေးပါသော ဆေးဝါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ဆေးဝါးရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်
ပင်လယ်‌ရေညှိများတွင်ပါဝင်သော ကလိုရိုဖီးနှင့်လစ်ပစ်များ ပါဝင်မှုတို့ကို လေ့လာစမ်းသပ်ခြင်း
ကင်ဆာရောဂါအတွက်အသုံးပြု၍ရနိုင်သောမင်းကွတ်သီးမှ Mang၀stinဒြပ်ပေါင်း ထုတ်ယူခြင်း
ဓနိရိုးတံမှ Herbal Tea အဖြစ် စမ်းသပ်လေ့လာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
ပယင်းပါဝင်သောMosquito repellent စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
ပယင်း (Amber) တွင်ပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းအချို့နှင့် အာနိသင်သက်ရောက်မှုများအား စမ်းသပ်လေ့လာခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
ကျန်းမာရေးဓာတ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန်ကမ်းဇော်ဆီသန့်စင်ခြင်းနှင့် ကမ်းဇော်ဆီအားအသုံး ပြု၍ ဆေးဖက်ဝင်ထုတ်ကုန်များအဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
Zinc oxide cream စမ်းသပ်ပြုလုပ်ခြင်းသုတေသနလုပ်ငန်း
အုန်းဆီ(Virgin coconut oil, Hair coat, Toner) သုတေသနလုပ်ငန်း
Aseptinol germicidal solution စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားများအပေါ် အာနိသင်သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ခြင်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀)
၁။ KayThi kyaw, Myat Chaw Su, Yu Yu NweOo, Gadae Maung Maung, "Investigation of Some Compounds and Antioxidant Activity of Myanmar Amber",ဒသမအကြိမ်တိုင်းရင်းဆေးသုတေသန စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၀‌
၂။ Yu Yu Nwe Oo, Myat Chaw Su, Kay Thi Kyaw, Gadae Maung maung, ” Oil extraction and physicochmemical analysis of Payena paralleloneura Kurz. Seeds”, ဒသမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၀
၃။ Gadae Maung Maung,"Formulation of mosquito repellent from plant origin", Drugs development from Herbs and marine medicinal materials international workshop, Vietnam, 2018, December 10-12
၄။ Yu Yu Nwe Oo," Investigation of phytochemical constituents and antimicrobial activity of Payena lucida Wall. Ex. Don A.DC", Antimicrobial resistance and strategies for its mitigation", International workshop, India, 2018, July 10-13
၅။ Yu Yu Nwe Oo, Myat Chaw Su, Kay Thi Kyaw, "Determination of Chlorophyll Content from Microalgae" International Journal of Advanced Research Publications, ISSN 2456-9992, Vol. 1 (5), pp. 298-301. 2017.
၆။ Khin Khin Win Aung, Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu New Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Phyu Phyu Win, "Antioxidant Activity of Formulation of some Myanmar Medicinal Plants Journal of Myanmar Academy of Technology, Vol. 16, July, 2016.
၇။ Yin Yuan, Khin Khin Win Aung, Xiao-Ku Ran, Xiao-Tong wang, De-Qiang Dou, Feng Dong A new sesquiterpene lactone from Yacon Leaves, Natural product Research Talor& Francis Group London, England, 2016.
၈။ Khin Khin Win Aung, Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu New Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Phyu Phyu Win," Estimation of Antioxidant Activity, Total Phenol and Flavonoid Content of Some Myanmar Medicinal Plants", Conference on SEA-EU-NET Science, Technology & Innovation Days, Vietnam, 2016.
၉။ TinjiaoSuo, Xiaotong Wang, Dewei Li, Khin Khin Win Aung, Xiaoku Ran, Deqiang Dou, Feng Dong, "Extraction of Yacon Leaves Enhances Enhydrin Degradation", J. Chem.Soc.Pak., 38:2, 379-383, 2016.
၁၀။ Myat Chaw Su, Gadae Maung Maung, Yu Yu New Oo, Kay Thi Kyaw, Myint Myint Khaing, Mar Mar Myint, Khin Khin Win Aung, "Evaluation of the Antioxidant Activity of Some Medicinal Plants and Myanmar Traditional Medicine Products", (Proceedings of the Sixth Traditional Medicine Research Congress), Mandalay, Myanmar, Dec, 2015.
၁၁။ Hla Myat Mon, Khin Khin Win Aung, Kay Thi Kyaw, Gadae Maung Maung, Yu Yu New Oo, Myat Chaw Su, In VitroAnti-malarial Activity of Some Myanmar Medicinal Plants, 42th Myanmar Health Research Congress, Programme and Abstracts, The Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Health, 6-10, Jan, Yangon, Myanmar, 2014.
၁၂။ Khin Khin Wing Aung, Saw Hla Myint, Tin Myint Htwe, Hla Myat Mon, Antimalarial activity of extracts and isolated compounds from tubers of CyperusrotundusLinn. (Nut grass) on Plasmodium falciparum, (Proceedings of the First International Conference on Science and Engineering, 4, 239-242, December, 2009.
၁၃။ Myat Chaw Su, Khin Khin Win Aung, Hla Myat Mon , "Detection of Proceedings of the Anti-malarial Agents of Plant Origin from Selected Myanmar Medicinal Plants, 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, Thailand, 2008.
၁၄။ Khin Khin Win Aung, Advances in Natural Products: Role of Herbal Medicine in Myanmar, Daya Publishing House, Delhi, 219-228, 2007.
၁၅။ Sabai, Khin Khin Win Aung, Nwe Ni Thin, Kyi Shwe, and Tin Myint Htwe, Evaluation of Bioactivities of Some Myanmar Medicinal Plants Using Brime Shrimp (Artemiasalina) Toxicity Test, Journal of Myanmar Academy of Technology, Vol.1, pg. 105-112, 2001.
၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်မှ (၁၈)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရာပြည့်အကြို သိပ္ပံပွဲခင်းတွင် ပင်လယ်ရေညှိမွေးမြူသည့် နည်းစဉ်ပြသခြင်း
၂။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်မှ (၅) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၏ ဆဌမအကြိမ် တိုင်းရင်းဆေး သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် "Evaluation of the Antioxidant Activity of Some Medicinal Plants and Myanmar Traditional Medicine Products" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ကြားခြင်း
၃။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်မှ (၁၀)ရက်နေ့ထိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှကြီးမှူးကျင်းပသော 42th Myanmar Health Research Congress တွင် "In Vitro Anti-malarial Activity of Some Myanmar Medicinal Plants," ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပိုစတာတင်သွင်းခြင်း
၄။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံပရဆေးသုတေသနနှင့် တိုင်းရင်းဆေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
သုတေသနပြုလုပ်ရာမှ တွေ့ရှိချက်များကိုစုစည်း၍ “အစွမ်းထက်မြက်သည့် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပင်များ "အတွဲ(၁)"၊ "အတွဲ(၂)" နှင့် ငှက်ဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည့် "မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ" စသည့်စာအုပ်များကို ပြုစု ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
email: prdctrcdri@gmail.com, yuyunweooo@gmail.com,
ဖုန်းနံပါတ် + ၉၅-၉၂၆၃၅၁၈၇၂၇၊ +၉၅-၁၆၆၄၈၁၃